Tom Howard - Ampivoaro ny orinasam-bary cannabis amin'ny lozisialy mpanafika antsika
Teratany Peoria, Illinois, Thomas Howard nahazo diplaoma tao amin'ny Oniversite Illinois Wesleyan sy Sekolin'ny Lalànana ao Marquette University.
Nandritra ny asany dia nahazo mari-bola an-tapitrisany dolara izy, nampihatra didim-pitsarana, ary niaro ny zon'ny mpanjifany sady nanoro hevitra ny amin'ny fomba hampihenana ny fotoana sy ny vola lany amin'ny fampiharana ny fifanarahana amin'ny alàlan'ny fitsarana.
Izy dia miasa ao amin'ny Filan-kevitra momba ny banky, ny fifindra-monina ary ny rongony ao amin'ny Florida State Bar Association. Rising Star nataon'ireo mpisolovava Super ary amin'ny maha-Mpanolotsaina misongadina avy amin'ny Mpisolovava mitarika nanomboka tamin'ny taona 2015.
Nandritra ny fanaony dia efa mpandraharaha nifantoka tamin'ny famoronana sanda.
Tamin'ny 2013, te hamaly soa ny olona i Tom tamin'ny fividianana vaovao nosoratany tamin'ny taona 2010 momba ny lalàna marijuana ary namoaka hevitra momba ny fampiharana fisolo vava politika. Izy sy ny mpamatsy vola dia nanangana orinasa iray ary nanangana ny fampiharana mpisolovava politika, Callitics
Nanomboka nampianatra ny tenany momba ny kaody sy ny fomba fiasan'ny rindrambaiko sy ny Internet izy. Niara-niasa sy niara-niasa tamin'ny ekipa eran'izao tontolo izao izy, namorona tambajotran'ireo mpamorona atokisana azony ianteherana amin'ny mpanao arafitra sy injenieran'ny vahaolana rindrambaiko fanao amin'ny sehatra rehetra, ankoatry ny varotra sy ny endrika famolavolana ilaina rehetra izay ilain'ny orinasa amin'ny Internet.
Taorian'ny niompiana sy ny fianarana ilay rindrambaiko sy ny orinasam-pifandraisana nandritra ny taona maro, Tom Howard namorona orinasa teknika iray antsoina hoe Stumari mba hanampy amin'ny famolavolana zavatra, toy ity tranokala ity, ary fananganana rindrambaiko hafa.
Tamin'ny lohataonan'ny taona 2016, Tom Howard dia te-hanomboka hampiasa ny fahalalany rindrambaiko ho an'ny fampiharana ara-dalàna. Nisy fangatahana visa H-1B tonga manerana ny latabatra ary fantany fa azo fehezina izany noho ny karazana tahiry sy ny habetsaky ny fangatahana mitaky fanamafisana.
Nanao fikarohana vitsivitsy izy hamaritana ny haben'ny tsena sy ny fangatahana vahaolana an-tranonkala mba hampivoarana ny fizotran'ny fizotran'izy ireo rehefa miezaka manakarama ny talenta ara-teknika tena tsara indrindra manerantany.
Miaraka amin'ireo angon-drakitra dia niverina tany amin'ireo ekipa natsangany niaraka tamin'i Stumari i Tom Howard ary nanomboka namorona vahaolana vaovao ho an'ny olan'ny fifindra-monina eo amin'ny orinasa. Tsy ny visa ihany no tokony hifanaraka amin'ny lalàna miovaova avy amin'ny Sampan-draharahan'ny Fadintseranana sy ny fifindra-monina ary ny filoham-pirenena ankehitriny, fa avy eo ny satan'ny manana visa dia tokony hohajaina hatrany.
Mbola mitohy hatrany ny fampandrosoana hatramin'izao ary manampy ny olona hahatsapa ny nofinofy amerikana azy.
Nandritra ny fotoana fialan-tsasatra nataony nandritra ny taona vitsy naha-fanaovany lalàna dia nanadihady momba ny tantara sy ny lalàna momba ny raharaham-pitsarana momba ny maha-ara-dalàna ny lalàna marijuana ao amin'ny firenena i Tom Howard. Navoakany ny tantara novokarin'ny fikarohana tamin'ny solon'anarany hoe Hoam Rogh. Satria namoaka boky roa hafa izy izay nosoratany tamin'ny fotoanany tao amin'ny sekoly lalàna.
Avy tao, Tom Howard dia nanitatra ny fikarohana ho an'ny faritra sarotra kokoa momba ny lalàna federaly ary nanomboka namoaka sy niteny ny olana isan-karazany mifandraika amin'ny indostrian'ny cannabis mipoitra. Amin'ny maha mpisolovava iray any Peoria, Illinois, dia tsy ferana hatramin'ny 2018 ny fanaony amin'ny otrikaretina hatramin'ny taona XNUMX, rehefa nanomboka fantsona YouTube momba izany izy ary nanomboka ny diabe mankamin'ny fangatahana ara-dalàna ny fampiasana ny olon-dehibe.
Mbola afaka mahita dika mitovy amin'ilay boky nosoratany ianao, saingy navoaka tamin'ny alàlan'ny lohateny kely tsy mahamenatra, ao amin'ny Amazon.
Tamin'ny taona 2018, Tom Howard dia nanatontosa vinavinan'ny trosa arahin'antoka 100, ary nahita fangatahana banky ampy hahafantarana azy ireo.
Nijanona teo amin'ny fironana ambony amin'ny sehatry ny ara-dalàna izy ary nanomboka nahita ny sangan'asa momba ny fahaizany teknika sy banky litigation.
Vokatr'izany dia namoaka ny Collateral Base izy ho loharanom-bola ho an'ny banky ara-barotra ary hanasongadinana ny tontolon'ny lalàna momba ny fifanakalozana ara-barotra sy ny andrim-panjakana.
Tom Howard dia mampifangaro ny rindrambaiko sy ny fahaizany ara-dalàna hanomezana saram-bola madiodio amin'ny banky ara-barotra, ary hampiasa ny angon-drakitra an-tsokosoko mba hanohizanao sy hanatsarana ny serivisy atolotra ho an'ny mpanjifan'ny banky fiarahamonina.
Mpahay lalàna cannabis ao amin'ny media sosialy
Tom Howard dia nanao fikarohana mavitrika ary nanompo ny filàna ara-dalàna ny orinasa cannabis nanomboka tamin'ny 2010. Matetika izy no namoaka momba ny olana isan-karazany atrehin'ity orinasa ity ary nisolo tena ireo andrimpanjakana ara-bola sy rongony amin'ny orinasa vaovao sy sarotra. Tamin'ny taona 2018 dia nanomboka i Tom Howard a YouTube Channel ary nanangana ity tranokala ity mba hanitarana ny fahaizany mifandray sy manompo ny orinasa cannabis.
Mpahay lalàna momba ny angovo